भारतीय दूतावासले यस्तो पत्र लेखेपछि ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भएको रहेछ, आखिर के थियो त्यो पत्रमा जसले गलायो सरकारीलाइ ? (पत्रसहित) – Etajakhabar
भारतीय दूतावासले यस्तो पत्र लेखेपछि ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भएको रहेछ, आखिर के थियो त्यो पत्रमा जसले गलायो सरकारीलाइ ? (पत्रसहित)
सरकारले असार १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले असार २ गते आपुर्ती मन्त्रालयले गरेको निर्णय सदर गर्दै भारतवाट आयात हुने तरकारी र फलफुलहरुमा भएको विषादी परिषणमा कडाई गर्यो । तर त्यो कडाई एक साता पुग्नासाथ फेरी मन्त्रीपरिषद बैठकले नै संसोधन गर्यो । जसका कारण भन्सारमा फलफूल र तरकारीको विषादी परिक्षणमा गरिएको कडाई खुकुलो पारीयो । जसको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालले भारतवाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परिक्षणमा कडाई गरेको भएपनि खास उद्येश्य आयात घटाउनु नै थियो । सरकारले गरेको यो निर्णयका कारण भारतका ब्यापारीहरुको ब्यापार चौपट हुने भयो । जसका कारण ब्यापारीहरु दुतावासमा गुहार लगाउन पुगे ।
भारतीय दुतावासले उपाय निकाल्यो अब कसरी यो अवरोध हटाउने । दुतावासले भारतवाट आएको विषादी परिक्षणलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरितको कार्य भनेर ब्याख्या गर्यो । भारतीय दुतावासको तर्क छ ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी स्तर पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो । त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित हुन्छ । नेपालले त्यसको जानकारी भारतलाई अग्रिम गराउनु पर्ने थियो । जुन नेपालले गराएन । काठमाडौं स्थित भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोही ब्यहोराको पत्र लेख्यो ।
भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेका कारण नेपालमा पुन परिक्षण गर्नु भनेको गैरकर अवरोध हो भन्दै भारतले ब्याख्या गर्यो । त्यसरी भारतमै हुने परिक्षणका प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य भएका कारण पुनपरिक्षण गर्न नपर्ने भारतीय दुतावासको तर्क हो । दुतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।
Posted on: Monday, July 8, 2019 Time: 19:03:51